» गायक अशोक तामाङको तामाङ दोहोरीमा के छ ?
गायक अशोक तामाङको तामाङ दोहोरीमा के छ ?
३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १०:२४
मकवानपुर, ३१ जेठ । चर्चित मकवानपुरे गायक अशोक तामाङ र गायिका जस्मिन तामाङको तामाङ दोहोरी गीतको म्युजिक भिडियो आज शुक्रबार दिउँसो ३ बजे प्रिमियर हुँदैछ । जिग्मे मिडियाको प्रस्तुति रहेको गीतको म्युजिक भिडियो शुक्रबार दिउँसो जिग्मे मिडियाको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत प्रिमियर गरी सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ । म्युजिक भिडियो सार्वजनिक हुन थोरै समय मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा उनको म्युजिक भिडियोका बारेमा थप कौतिहलता श्रोता तथा दर्शकलाई छ ।
‘बोर्ला ङाई याम्बुरी, पैसा आरे ट्याक्सीरी ख्रेबारी साईली, कोर्दोला सफा ट्याम्पुरी’ बोलको यो लोकदोहोरी सुन्दै नाचौँ नाचौँ लाग्ने किसिमको छ । गीतको छोटो अडियो भर्सन तपाई पनि हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् –
यो गीतको पुरा भिडियोका लागि तपाईले आज दिउँसो ३ बजेसम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ । यो गीतको शब्द तथा लय सुन्दा गीतको म्युजिक भिडियोले थप उचाई चुम्न सक्ने देखिएको छ । गायक स्वयम नै यसमा अभिनय गर्दैछन् जसका कारण पनि यो थप रोचक हुनेछ । गीतमा अशोक र जस्मिनको शब्द रहेको छ । गीतको संगीत अशोकले नै तयार पारेका हुन् । मारुनी डिजिटल स्टुडियोमा रकर्डिङ गरिएको गीतलाई सुमन रानाले रकर्डिङ गरेका हुन् । विश्वास नेपालको एरेञ्जमा तयार भएको गीतलाई कुमार रानाले मिक्स गरेका हुन् । गीतको म्युजिक भिडियोमा गायक अशोकले नै अभिनय गरेका छन् । त्यस्तै उनलाई म्युजिक भिडियोमा मोडल अनिता गोलेले साथ दिएकी छिन् । अभि लामाको कोरियोग्राफी तथा निर्देशनमा बनेको म्युजिक भिडियोलाई सुर्य लामाको सिनेम्याटोग्राफी, कलरिङ र सम्पादन गरेका छन् ।
प्रविण राईको ड्रोन छायाँकनमा तयार भएको भिडियोमा अनिता र अशोकलाई दिया रिजालले सिँगारेका छन् । म्युजिक भिडियोका प्रोडक्सन म्यानेजर बब्लु गुरुङ हुन् । गायक तामाङ यस अघि गत पुसमा ल्होछार गीत ‘जेबा म्राङ्सी’ सार्वजनिक गरेर थप चर्चामा आएका थिए । उनका अन्य गीतलाई पनि दर्शक श्रोताले रुचाएका थिए । उनका यस अघि नै मै विदेश जाँदा, हिमाल पारी गाउँ, मैच्याङ्नी मोरी, वैँशले लगायतका गीतहरु सार्वजनिक भईसकेका छन् ।